Fitantanana sy ny zon’olombelona: notebahin’ny eveka ireo mpiasam-panjakana sasany | NewsMada
Fitantanana sy ny zon’olombelona: notebahin’ny eveka ireo mpiasam-panjakana sasany
Nifarany ny herinandro teo ny fivorian’ny Fivondronamben’ny eveka (Fem). Niompana amin’ny hafatry ny Papa Fransoa sy ny tontolo iainana amin’ny ankapobeny ny fanambarana ary tena hentitra izy ireo. Teo koa anefa ny zon’olombelona…
Hentitra ny fanambaran’ny Fivondronamben’ny eveka(Fem) momba ny “tontolon’ny aina” sy ny “zon’olombelona”. Notanisain’izy ireo fa mikorosy fahana izany. Ny trano fonenana tsizarizary, trano bongo ny sasany. Tsy ampy sakafo sy rano fisotro ny toerana maro. Ireo zokiolona tsy voakarakara araka ny tokony ho izy, tsy voaray ara-potoana ny fisotroan-dronono. Mahazo vahana ny fahantran’ny madinika tsy manan-katao. Tsy mety ho fongotra ny kolikoly. Tsy matahotra an’Andriamanitra intsony ireo mpiasa any amin’ny Fitsarana, ny fananan-tany , ny habantseranana, ary ny any amin’ny tobim-pahasalamana… “Ho faty tokoa ny « fanahy maha olona ». Mitondra amin’ny fahafatesana ireo fahasimbana ireo fa tsy mitondra velively amin’ny fiadanana andrandraina”, hoy ny Fem.
Manampy ireo ny toe-tsaina samy maka ho azy eny amin’ny toeram-piasana. Maro ireo mpiasam-panjakana sasany tsy mahatsapa ny maha zava-dehibe ny andraikiny. Tsy voahaja ny ora fiasana. Tara lava. Simba loatra i Madagasikara. Misy sahy milaza aza fa tsy misy fanantenana intsony. Nitondra soso-kevitra anefa ny Fem ka anisan’ny maika ny fanarenana ny maha-izy azy ny soatoavina malagasy. “Homen-jo aman-kasina mba hahafahany misitraka tontolo iainana mendrika ny olona manontolo ary ny olona rehetra. Tsy maintsy atao andrimaso akaiky ny fanabeazana sy ny asa eo anivon’ny fianakaviana, araka ny fampianarana tamin’ireo ankizy teny amin’ny Akamasoa. Zava-dehibe ny fifandraisan’ny mpiray tampo sy ny mpiara-belona ary ny zavaboary. Mila jerena ny rafi-pampianarana sy programan’ny fampianarana. Anisan’ny mandrafitra ny « fanahy maha olona » ireo”, hoy ihany ny Fem.
Mahay miray hina tamin’ny Can nataon’ny Barea
Mila manam-pahaizana sy hendry ary modely ny fampivoarana. Aoka hirahina manerana ny Nosy ireo mahavita fianarana fa tsy havangongo amin’ny toerana iray. Ilaina firaisankina izany. “Hita taratra hatramin’ireny fandresen’ny Barea tany Ejipta ireny fa mahay miray hina ny Malagasy. Nihamafy orina izany tamin’ity famangian’ny Papa Fransoa teto”, hoy ny Fem. Tahaka izany koa ny fahapotehan’ny tontolo iainana ka nanaovan’izy ireo antso avo mba tsy ho teny manaitra fotsiny no atao fa tena tanterahina sy iainan’ny tsirairay izany. Notsiahivin’ny fanambarana fa tsy raharahiana ny fifandraisana amin’ny zavaboahary : doro tanety. Miharihary ny fandrobana tsy am-piheverana ny harena voajanahary… Hany ka miova ny toetr’andro, ny rano miharitra. “… Miharipaka noho ny fitrandrahana an-tsokosoko sy ny fanondranana tsy ara-dalàna ireo zava-manan’aina maro karazana na ny zava-maniry na ny biby. Tokony hiaiky ny rehetra fa potika ny tontolo iainantsika”, hoy ny Fem.
Na izany aza anefa, nitondra vahaolana ireo eveka ka nilaza fa mila fiovam-penitra mahery vaika. Arovana toa ny anakandriamaso ny tontolo iainana, indrindra ny sisa ananantsika mba hitondra fivelaran’ny mahaolona. Ampahany amin’ny fanambaran’ny Fem ireo, ankoatra ny fampahatsiahivana hatrany ny hafatry ny Papa Fransoa sy ny hafatra ho an’ny kristianina.